ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola baseSpain UDani Ceballos Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwa ngegama lesidlaliso "UDani". Ibali lethu le-Dani Ceballos yobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lobuntwana bakhe ukuza kuthi ga ngoku.
UDani Ceballos Ibali lobuntwaneni- Uhlalutyo ukuza kuthi ga ngoku. Credits ukuze Ukuhlanjwa, indlu yezixhobo zemfazwe kunye IG
Uhlalutyo lwethu lubandakanya ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yosapho, imfundo kunye nokwakhiwa kwamakhondo omsebenzi, ubomi bokuqala bomsebenzi, indlela eya kwibali lodumo, ukunyuka kwibali lodumo, ubudlelwane kunye nobomi bobuqu njl.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nobuchule bakhe bokudlala ibala eliphakathi, elifumene kuye indumiso evela kubaxhasi beArsenal. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga i-Biography kaDani Ceballos 'enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
UDani Ceballos Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Bi- Obomi bakwangoko
Ukuqala, amagama akhe apheleleyo nguDaniel Ceballos Fernández. UDani Ceballos njengoko ebizwa njalo uhlala ezelwe kwi-7th ka-Agasti 1996 kunina, uSalomé Fernández kunye noyise, u-Antonio Ceballos kuMasipala wase-Spain e-Utrera. Apha ngezantsi kukho ifoto yabazali bakhe abathandekayo.
Intsapho kaDani Cabellos imvelaphi yabo kunye neengcambu zabo zivela eSevilla, idolophu elikumazantsi eSpain. Baduma kwilali encinci yase-Utrera ethathwa njengesiqu senkunzi elwayo. Ubusazi?… I-Utrera iyilali yakudala UJoseph Antonio Reyes owabulawa ngoJuni 1st 2019 xa imoto yakhe iMercedes Brabus S550V ihambile kwindlela ye-A-376 kufutshane naseUutrera.
UDani Ceballos Imvelaphi yoSapho. Credits kwii-DepositPhotos kunye ne-Espanafascinante.
UDani Ceballos wakhula ecaleni komntwana wakhe udadewabo uSalome Ceballos. Wazalwa njengomntwana wokuqala kunye nonyana ngaphandle kwabantwana bobabini kubazali bakhe. Ngokungafaniyo nomntu waseSpainard UGerard DeulofeuU-Dani wayezolile kwaye eqokelele inkwenkwana. Apha ngezantsi kukho ifoto yakhe yokuba nenkwenkwe ethambileyo.
UDani Ceballos- Ukukhula kweentsuku
UDani Ceballos Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Bi- Imfundo kunye neBraduer Buildup
Ukuza kuthi ga kwilali ethand 'ibhola kwaye ilale UJoseph Antonio Reyes njengesithixo sakhe, kwakuyinto yemvelo ukuba uDani Ceballos awuthande umdlalo omnandi.
UDani Ceballos, xa wayeneminyaka eyi-7 wadibana ne2003-04 isizini xa uLate Reyes yayiyinxalenye yeAnninciples yaseArsenal FC eyayihamba ngela xesha lonyaka bengafezekanga kwaye bephumelela iPremier League.
IAnnadictides ayinamandla - Imidlalo ye-49 engahlawulelwanga
Le fani inomtsalane yabona umdla kaDani Ceballos onomdla wokuba ngumdlali webhola. Ekuqaleni, waqala wakhe Ukubaleka kwebhola kwigumbi lakhe lokuhlala kwiintsapho kodwa kamva waya kudlala emasimini e-Utrera.
Akuzange kuthathe xesha ngaphambi kokuba uDani abe nesiphiwo sokwenza zonke iintlobo zezinto ngebhola ekhatywayo emqhubela ukuba aye kwezilingo kunye neeklabhu zaseSpain eziphezulu. Xa wafumana ubizo lokuya kwiilingo apho I-Sevilla academy, ulonwabo olwabonakaliswa ngumntu ngamnye kumalungu osapho lwakhe lwalungekho imida.
UDani Ceballos Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Bi- Ubomi bokuqala
UDani uphumelele iimvavanyo zeSevilla ze-academy kwimibala ebalekayo kwaye wangena kwi-academy eneminyaka eyi-8 ngexesha le-2004-2005 isizini, nje isizini emva kokuba iArsenal babenomboniso wabo ongabonakaliyo. Njengabantwana abaninzi, kwakumnandi ukuzimanya neqela lolutsha leSevilla FC nawe kuye kwafuneka enze amadini amaninzi njengezinto ezilahlekileyo zemihla yokuzalwa okanye izinto awayezijonge ekhayeni lakhe.
UDaniel omncinci oboniswe ngezantsi wenze umboniso kwangoko kunye neklabhu njengoko wayenceda amaqabane akhe ekuphumeleleni indebe yakhe yokuqala.
UDani Ceballos- Ubomi boMsebenzi waseNkqubela. Ikhredithi kwi-IG
UDani Ceballos Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Bi- Indlela eya kwiNdaba ibali
Kwiziko lemfundo, uDani omncinci wayenokuzimisela okuqinisekileyo ukwenza amaphupha akhe azaliseke kwaye amabhongo akhe okufikelela kwiqela lokuqala leklabhu akabonwa njengento edlulayo.
kufike ingxaki skwade kwasebutsheni bakhe. UMBULELO UDani Ceballos ikhutshwe kwi2009 yiSevilla academy ngenxa ye Ingxaki ye-bronchitis engapheliyo.
UDani Ceballos Indlela eya kwiBali elidumileyo
PHAWULA: Ngokhangelo lukaGoogle, i-bronchitis engapheliyo luhlobo olunye COPD (Isifo esinganyangekiyo sesifo semiphunga). Kwimeko kaDani Ceballos, wayenenxeba lokulimala kunye nokulimala kwesifuba esikufutshane nentliziyo yakhe evelisa inkungu eninzi. Le meko ikhokelela ekubeni uDaniel Ceballos abe nokukhohlela kunye nobunzima bokuphefumla ngenxa yoko esenza ukuba i-academy yakhe ifikelele kwisigqibo sokuyeka umsebenzi wakhe kunye nabo.
Nawuphi na umntwana oye waphila ngolu hlobo lokugula kweli nqanaba lomsebenzi wabo uya kwazi kakuhle kakhulu kwaye naziintlungu zokomoya ezinokubangelwa. Abazali baka-Dani banceda unyana wabo ukuba alawule imeko yakhe yempilo. Baye bamvumela ukuba asondele kufutshane nosapho lwabo kuqala ngokumenza ukuba athathe ikhefu emsebenzini wakhe, emva koko bamvumela ukuba aqhubeke nokudlala ibhola ye-CD Utrera ngelixa wayefumana unyango.
UDani Ceballos Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Bi- Ukunyuka Kwidumo Ibali
Emva kweminyaka embalwa ngokuchanekileyo kunyaka we-2011, uDani Ceballos waba ngcono. Ugqibe kwelokuba aqhubeke nophuhliso lolutsha kwi-Real Betis emva kokusayina nabo kwi-2011.
UDani wayesazimisele ngokuqinileyo ukwenza amaphupha akhe eqela lokuqala azaliseke. Ubusazi?… Emva kokuphuma kwizikhundla ezahlukeneyo kwizifundo, uDani utyikitye isivumelwano sokusebenza kunye ne-Real Betis kwi-22 ngoFebruwari 2014 nditsho ndisesemncinci. Eyona nto iphambili ayenzileyo kwiklabhu yayikukunceda iqela lakhe liphumelele iSegunda División I-La Liga 2 indebe.
UDani Ceballos ubambe i-Real Betis Trophy yakhe kunye nebhaso
Emva nje kokuphumelela indebe, akuzange kuthathe thuba lide ukuba uDani aguqukele kwimidlalo yebhola ekhatywayo yaseSpain. Waba haun Real Real scouts ecela ukutyikitywa kwakhe. Ngokufanelekileyo on I-14 kaJulayi 2017, iReal Madrid ibhengeze ukusayinwa kweCeballos kwisivumelwano seminyaka emithandathu.
Ekuqaleni, yonke into yayihamba kakuhle naye kwiklabhu. Kodwa umzuzu onzima wobomi bakhe wexesha wafika Zidane ndagqiba kwelokuba ndimshiye Modric kwaye Kroos. Owona mzuzu ukhathazekileyo kuDani wafika nini Zidane wamsebenzisela i engakholelwale 28 imizuzwana womdlalo ngokuchasene neLeganes, isenzo esenze ukuba ihlwempu uDani (ofanelwe ngezantsi) aqonde isidingo sokufumana enye indawo yokudlala umdlalo wakhe.
UDani Ceballos ushiya isandi emva kokusetyenziswa kwemizuzwana ye-28 kumdlalo
Ukubonisana notata ka-Late Jose Antonio Reyes: Njengoko bekutshiwo, umzuzu wokucingisisa okunzulu wafika kuDaniel Ceballos ngokubhekisele kwikamva lakhe neklabhu. Uye watyhila ukuba uthethile notata ka uJoseph Reyes ongasekhoyo ngamazwi akhe apha ngezantsi;
'Ndithethile noyise ngaphambi nje kokuba eze eArsenal kwaye wandixelela ukuba ndingacingi kabini kuba iArsenal iyiklabhu emangalisayo, egxininisa ukuba unyana wakhe wokugqibela uJosé wayenexesha elimnandi apha.'
Jonga kwi-25 kaJulayi 2019, kwabhengezwa ukuba uDani Ceballos ujoyine iArsenal kwisivumelwano semali-mboleko yokuphela konyaka kwaye wanikwa inombolo ihemti ezisibhozo ezazishiywe ngu Aaron Ramsey.
UDani Ceballos ojoyina iArsenal. Ityala kwi Ezizimeleyo
Umzuzwana onemvakalelo weza kuDani Ceballos akubona ifoto yomntu ongasekhoyo uJoseph Reyes rhoqo xa esiya kumhlaba woqeqesho. Oku kwamnika ithemba lokunceda iklabhu ukuba iphinde ibuqaqambe ubungakanani bayo obuphakathi- ebaleni.
Ubusazi?… Ukuqala kuka-Dani ukuqala kweArsenal kwaphetha ngaye ngokubonelela ngabancedisi ababini kunye nokuphumelela iMan of the Match.
UDani Ceballos ophumelele indoda yebhaso lomdlalo kumdlalo wakhe wokuqala kunye neklabhu. Ityala kwi Ibhanti
Abalandeli beArsenal babanga ukuba indlela yakhe yokudlala kumdlalo wakhe wokuqala yadibanisa ubuhle beRoll Royce kunye ne-injini ye-Mustang. Ngexesha lokubhala, uDaniel Ceballos ubonwa njengomnye weqela elingapheliyo lemveliso yokuhlaselwa kwabadlali abasemagqabini abaye beza kudlala kwiklabhu yaseMonti London. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
UDani Ceballos Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Bi- Ulwalamano lobomi
Ubusazi?… Abalandeli beArsenal balinda okwethutyana ukwamkela uDani Ceballos kwisandi. EMBELA kubalulekile ukuba samkele intombazana enguDani Ceballos uMaria Sanchez Del Moral kwisixeko esihle saseLondon.
UMaria Sanchez Del Moral oboniswe ngezantsi uneminyaka engama-24 ubudala ngexesha lokubhalwa. Eli xesha lithetha ukuba mdala kunonyaka kunenkwenkwe yakhe. Yintoni!!… Iminyaka njengoko besitsho ukuba linani nje.
Dibana noMaria Sanchez Del Moral- Uthando lukaDani Ceballos. Ikhredithi kwi-IG
UMaria uvela eSeville, yona le dolophu kunye nendoda yakhe. I-WAG ebabazekayo yayikade isebenza njengomfundisi-ntsapho kwisikolo sabantwana abasaqalayo emva koko eMadrid ngaphambi kokujoyina inkwenkwe yakhe eLondon. Ngoku ka Ilanga, Ukufundisa kusegazini losapho lwakhe njengoko umamakhe wamfundisayo ngelixa esesesikolweni. Ukwenzela ukuba ongeze umvuzo wakhe njengomfundisi-ntsapho, uDel Moral wayekhe wenza imodeli njengomsebenzi wethutyana.
Zombini zithanda iintaka uDani Ceballos kunye nentombi yakhe uMaria baqala ukuthandana ukusukela nge2016, unyaka aqala ngawo ubomi benqanaba eliphezulu kwi-Real Betis. Ubudlelwane babo bomdlalo weedrama babona uDaniel Ceballos eqalisa ukuba ngabahlobo abasenyongweni kuMaria ngaphambi kokuba yonke into iguqulwe luthando lwenene.
UDani Ceballos noMaria Sanchez Del Moral. Ikhredithi kwi-IG
UDani ukonwabisa abalandeli bakhe abangaphezu kwesigidi se-1.6 kwi-Instagram eneefoto zakhe kunye nentombi yakhe. Waye kanye wabelane ngesithombe esithandekayo kwiphepha lakhe le-Instagram apho wabonakala ekhululekile ngokupheleleyo ekunonwabiseni kwebhati yeshushu kunye nentombi yakhe.
UCeballosl uyakuthanda ukuba nexesha esemgangathweni kunye nentombi yakhe
Ukwahlulela kwindlela bobabini abathandi abaqhuba ngayo njengoko kubonwe ngezantsi, yinto yeloxesha ngaphambi kokuba bobabini bathathe isigqibo sokuthatha inyathelo langaphambili elikhokelela kumtshato wabo okanye emtshatweni wabo.
UDani Ceballos- Ukuvumela iimvakalelo zakhe zenze iNtetho. Ikhredithi kwi-IG
UDani Ceballos Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Bi- Ubomi bomntu
Ukwazi uDani Ceballos Iinkcukacha ngobomi bakho ngaphandle kwesandi kunokukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo ngaye. Siqala ngombuzo othi; Yintoni eyenza uDani Ceballos Tick?
Yintoni eyenza uDani Ceballos Tick. Ikhredithi kwi-IG
Kude kude nebhola ekhatywayo, uDaniel Ceballos ngumdlalo omangalisayo, uyilo, ukuzithemba, igunya kwaye kunzima kakhulu ukulixhathisa. Ubonakalise ukuba ngumntu okwaziyo ukufikelela kuyo nayiphi na into ayifunayo kuyo nayiphi na indawo yobomi abazibophelele kuyo. Umzekelo ubonwa kwindlela yakhe aze anyuke aye kumabali odumo.
Ukugweba ngoncedo awalunikezelayo kwisandi, u-Dani ngumntu okwaziyo ukukhokelela abantu kwinjongo ekwabelwana ngayo uloyiso. Okokugqibela, unesimo esihle sokuhlekisa esenza ukuba ukusebenzisana nabanye abantu kube lula.
UDani Ceballos Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Bi- Ubomi Bentsapho
UDani Ceballos unosapho olukhulu bonke abangabemi baseSevilli ngemvelaphi. Uyaziqhenya ngobukhokho bakhe kunye neengcambu zakhe ngexesha elilungileyo nelibi. Onke amalungu osapho; Umama wakhe, utata, umntakwabo, udadewabo, umzala, umalume, umtshana njlnjl.
UDani Ceballos ubhiyozela usuku lokuzalwa kwakhe kunye namalungu osapho. Ikhredithi kwi-IG
Ukujonga indlela yakhe enzima yokuba libali, uya kuqaphela ukuba amalungu osapho lukaDaniel Ceballos, ngokukodwa abazali bakhe beme ngakuye ngexesha lokugula kwakhe (COPD) ISifo esiNgxamisekileyo sePulmonary Disease. Kuncinci okwaziwayo malunga nokuhlala komzali wakhe, kodwa inye into esiqiniseke ngayo kukuba baphakathi kwabona balandeli bakhe. Ngoku makhe sikwazise kuDani Ceballos udade, inombolo yakhe ye-1 fan.
Malunga noDani Ceballos Sista: Dibana noSamole, udadewabo kaDani Ceballos ogama elifanayo kunye nonina.
Dibana noSalome Ceballos- udade kaDani Ceballos. Ityala kwi I-Elespanol
USamole Ceballos ungumsebenzisi osebenzayo kakhulu kwiinethiwekhi zentlalo kunye nomlandeli othembekileyo womntakwabo Dani. Njengabazali babo, akakathandabuzi kumaxesha akutshanje ukuba azikhusele ngokugxekwa ngokubhekiswa kuye ngabalandeli ngokushiya iReal Betis yaseMadrid. Ngexesha elithile, umyalezo kaSalomé xa wayegxekwa kakhulu kumntakwabo, wawucacile. Wake wathi;
“Mzalwana, ungumzekelo wokuzincama ukoyisa, unayo yonke. Uyintshatsheli. Uyalwa, uyakhwaza, ubaleka… WONKE uyenza ngoncumo. Ndiza kuhlala ndikuxhasa ngebhola yakho, ndikuxelele ukuba ungumlingo, ukuba wahlukile kwabanye. ”
Ukuba ngowona fan omkhulu kaDani ayisiyomsebenzi wakhe wosuku kuphela. USalome oboniswe ngezantsi kunye nomntakwabo ukwayi-beautician eyazincama ngokunika abantu unyango oluhle.
UDani Ceballos kunye nodadewabo- uSalome Ceballos. Ungumlinganisi weentliziyo kunye nobungcali. Ityala kwi I-Elespanol
UDani Ceballos Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Bi- yokuPhila
Ukuthatha isigqibo phakathi kokusebenziseka kunye nokuzonwabisa ngoku ayisosikhetho esinzima kuDani Ceballos. Njengakwelo xesha lokubhala, imali eninzi kwizigidi zeepawundi ixabisa igama lakhe ngenxa yomsebenzi wakhe okhethiweyo njengomdlali webhola onobuchule.
UDani Ceballos, njengoko ngexesha lokubhalwa okwangoku AKUKHO kuphila ubomi obucekeceke ngokubonakalayo ngokubonakala kwesithuthi esineemoto ezintle njengoko zibhalwe ngezantsi.
UDani Ceballos uBomi beStyle
UDani Ceballos ukusuka kwinto ebonakala ngathi ayinangxaki enkulu yokulawula iimali zakhe zebhola kunye nokonga ezinye ngemini yemvula.
UDani Ceballos Ibali lobuNtwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold Bi- Inyaniso engekho
Ubusazi?… Yaba sisiqwenga seendaba ezimbi ze Mesut Ozil xa umncinci weReal Madrid wajoyina iArsenal kwimali mboleko.
UMesut Ozil wothuswe kukufika kukaDani Ceballos. Ityala kwi Bonakalisa kunye neYouTube
Lophawu olubi kufanelekile kuba Ozil ube ngumxholo wokuqikelelwa okuxhaphakileyo malunga nekamva lakhe kunye neArsenal. Ukhutshiwe ukuba ashiye iArsenal ngokunxaxha emva kwesizini edumazayo ye2018 / 2019 kumantla eLondon. Okona kubaluleke kakhulu kukufuna kweklabhu ukukhupha umvuzo wakhe njengomdlali ohlawulwa kakhulu nge-350,000-ngeveki.
Ubusazi?… Uninzi lwabalandeli beArsenal alwazi ukuba uDani Ceballos unenombolo elungileyo yomntu ngamnye kunye neklabhu ye-Honours egameni lakhe. Apha ngezantsi kukho isicatshulwa esivela kwiphepha lakhe leWikipedia njengangokubhaliweyo.
UDani Ceballos Untold Iimbeko kunye namabhaso. Ikhredithi kwi-Wikipedia.
QHUBEKA: Enkosi ngokufunda ibali lethu likaDani Ceballos wokukhula komntwana kunye ne-Untold Biography Facts Ku- LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
I-Fernando Llorente Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts